Imigomo neMibandela yeWebhsayithi
Le migaqo kunye neemeko, kunye neMigaqo-nkqubo Yobumfihlo, lawula ukusebenzisa kwakho kwiwebhsayithi yethu ethi www.mh-chine.com (indawo yethu / iwebhusayithi), nokuba sisitye okanye umsebenzisi obhalisiweyo. Kucelwa ufunde le migaqo neemeko ngokucophelela ngaphambi kokuqala ukusebenzisa isayithi. Ngokusebenzisa indawo yethu, ubonisa ukuba uyayamkela le migaqo neemeko kwaye uyavuma ukuba uhlala kuzo. Ukuba awuvumelani nale migaqo neemeko, nceda ungayeki ukusebenzisa indawo yethu.
Ukuba unemibuzo malunga nabo okanye andifuni ukuwamkela, nceda uqhagamshelane noNobhala weNkampani kwi-86-574-27766888 ngaphambi kokusebenzisa lewebhu.
Sinokutshintsha le migaqo kunye nemibandela okanye umgaqo-nkqubo wethu wobumfihlo ngasiphi na ixesha ngokuhlaziywa kweli phepha. Kufuneka uhlolisise eli phepha rhoqo ngezikhathi ukuphonononga le migaqo kunye neemeko ukuqinisekisa ukuba uyavuya naluphi na utshintsho. Ukusebenzisa okanye ukufikelela kule website kubonisa ukwamkela kwakho le migaqo neemeko. Ukuba awuwamukeli le migaqo neemeko, nceda ungaqhubeki ukusebenzisa le website.
I-ofisi yethu ephambili i-#18 Ningnan North Road, Ningbo, eChina.
Ungaqhagamshelana nathi ngomnxeba kwi-86-574-27766888 okanye nge-imeyile .
Iwebhusayithi apho le miqathango neemeko zisetyenziswa kwaye apho esinesixanduva kuyo www.mh-chine.com.
Ukusebenzisa kwakho lewebhu
Ukufikelela kwisiza sethu kuvunyelwe ngethuba lesigxina, kwaye sigcina ilungelo lokurhoxisa okanye ukulungiswa kwenkonzo esiyinikezela kwisayithi yethu ngaphandle kwesaziso. Asiyi kuba noxanduva ukuba nangaliphi na isizathu sethu isayithi asifumaneki nanini na ixesha okanye nayiphi na ixesha.
Singawuthintela ukufikelela kwezinye iindawo zethu, okanye indawo yethu yonke, kubasebenzisi abhalisile nathi.
Amalungelo ePropati yoLuntu
Le webhsayithi kunye nazo zonke izinto ezikuyo zikhuselwe ngamalungelo epropati engqondo, kubandakanywa ne-copyright, nokuba yeyiphi na okanye ilayisenisi ukuba siyisebenzise. Izinto eziphathekayo ziquka, kodwa azinakuphela, ukuyila, ukubeka, ukujonga, ukubukeka, imifanekiso, iifoto, iividiyo kunye namaxwebhu kwiwebhusayithi, kunye nezinye izinto ezifana neenhlu zentengo, amanqaku, amabali kunye nezinye izibhalo.
Awukwazi ukukopa, ukubuyisela kwakhona, ukuphinda ushicilele okanye wenze ezinye izinto kule website zifumaneke kunoma ubani ngaphandle kwemvume ebhaliweyo.
Ungaprintela okanye ulande izinto ezivela kule website ukuba:
• akukho zixhobo eziguqulwa ngayo nayiphi na indlela;
• akukho mifanekiso, iifoto okanye ividyo zisetyenziswe ngokwahlukileyo kwisiqendu esilandelayo;
• I-copyright yethu kunye nezaziso zeempawu zorhwebo zivela kuzo zonke iikopi kwaye uyavuma ukuba le website ivela kwimithombo; kwaye
• umntu onika lona izixhobo uyazi ukuba zezi mithintelo.
Awuyikusebenzisa nayiphi na indawo yezixhobo kwiziko lethu kwiinjongo zorhwebo ngaphandle kokufumana ilayisenisi ukwenza njalo kuthi okanye kuthi ngathi ngokusebenzisa abalayisenisi bethu, njengoko kufanelekile.
Izicelo kunye neZiko loQeqesho
Isayithi lethu livumela ukufikelela kunye nokusetyenziswa kubabala be-calculators kwi-intanethi kubandakanya kodwa kungaphelelanga kwi-Seamwork + kunye ne-Coats Count ("i-App"). Iibalo ezahlukeneyo zineemisebenzi ezahlukileyo kwaye umsebenzisi makasebenzise i-calculator esekelwe kwimveliso yokuqikelelwa okufunekayo yomsebenzisi. Iimpawu zamanqanaba okubala ziquka ukuqikelelwa kokusetyenziswa komxube kunye nokuqikelelwa kobuninzi bomtya kunye nokuguqulwa kweenkqubo zokubala kunye nentambo.
Ukongeza, indawo yethu inikezela abasebenzisi ukufikelela kwizixhobo zokuqeqesha ("Izinto zokuQeqesha") ezibandakanya kodwa azikhawulelwanga kumavidiyo oqeqesho.
Kufuneka ufunde, wamukele kwaye emva koko uhambelane nale migaqo ukuze usebenzise i-App kunye noQeqesho lweeMpahla.
Ukuze usebenzise i-App kunye / okanye Izinto zokuQeqesha, sikunika ilayisenisi yokusebenzisa i-App kunye noQeqesho lwezinto zokusebenza kuphela kwiinkqubo zakho zoshishino zangaphakathi. Le layisensi yedwa kwaye ilinganiselwe kuwe yedwa kwaye ngenxa yoko ayiyikudluliselwa.
Awukwazi ukusasaza okanye ukwenza i-App kunye noQeqesho lweMpahla ezifumanekayo phezu kwenethiwekhi apho ingasetyenziswa ngamadivayisi amaninzi ngexesha elinye.
Awukwazi ukukopisha, ukuhlambalaza, ukubuyisela injini, ukudibanisa, uzame ukufumana ikhowudi yomthombo, ukuguqula okanye ukudala imisebenzi evela kwi-App kunye / okanye kwiZiko loQeqesho okanye nayiphi na inxalenye yalo.
Ngokusebenzisa i-App noQeqesho lweMpahla, uyavuma kwaye uyavuma ukuba:
• I-App kunye / okanye Izinto zoQeqesho zenzelwe iinjongo zolwazi kuphela; kwaye
• asenzi mvume okanye ukuqinisekiswa ngokuchanekileyo kolwazi oluqulethwe kwiiMpahla zoQeqesho okanye ulwazi oluveliswe yi-App. Ukusetyenziswa kwalolu hlelo lokusebenza kwaye iziphumo ezivela kulo zijoliswe njengekhokelo kuphela kwaye azilinganisi nesibonelelo, invoyisi, isimemo sokuphatha okanye esifanayo.
Ukuba sisebenzela nayiphi na idatha ebhaliweyo egameni lakho xa senza izibophelelo zethu phantsi kwesi sivumelwano, sobabini sibhala ngenjongo yethu yokuba wena (okanye umqeshi wakho, ngokufanelekileyo) uya kuba ngumlawuli weedatha kwaye siya kuba ngumprosesa wedatha kunye nakweyiphi imeko : I
• uyavuma kwaye uyavuma ukuba iinkcukacha zomntu siqu, xa kunesidingo, kufuneka zihanjiswe okanye zigcinwe ngaphandle kweNgingqi yezoqoqosho yeYurophu okanye ilizwe apho ukhona khona, ukuze unikeze umsebenzi we-App kunye nezinye izibophelelo phantsi kwesi sivumelwano;
• Uya kuqinisekisa ukuba unelungelo lokudlulisela ulwazi oluyimfihlo kuthi ukuze sisebenzise ngokusemthethweni, senze kwaye sitshintshe idatha yakho ngokwalo mvumelwano egameni lakho;
• Uya kuqinisekisa ukuba nawaphi na amaqela afanelekileyo axelelwe, kwaye anike imvume yabo, ukusetyenziswa, ukucwangciswa kunye nokudluliselwa njengoko kufuneke ngawo yonke imithetho ekhuselweyo yokukhusela idatha;
• siya kuqhuba iinkcukacha zomntu kuphela ngokuhambelana nesi sivumelwano, imimiselo kunye neemeko kunye nomgaqo-mfihlo kunye nayiphi na imiyalelo esemthethweni enikezwa nguwe ngezikhathi ezithile; kwaye
• Bobabini siya kuthatha amanyathelo afanelekileyo ezobugcisa kunye nenkqubo ngokuchithwa ngokungagunyaziswanga okanye okungekho mthethweni kwedatha yomuntu okanye ukulahleka kwayo kwengozi, intshabalalo okanye umonakalo.
Uxanduva lwethu kuwe
Le migaqo kunye nemimiselo ayifaki ikhefu lethu (ukuba kukho) ukuba:
• ukulimala okanye ukufa ngenxa yokunganakwa kwethu;
• naliphi na umba ongekho mthethweni ukuba singabandakanyi okanye sizame ukungabandakanyi uxanduva lwethu.
Asiqinisekisi ukuba le website iza kuhambelana nayo yonke okanye nayiphina i-hardware kunye nesofthiwe onokuyisebenzisa. Asiqinisekisi ukuba le website iza kufumaneka ngexesha okanye ngexesha elithile. Sigcina ilungelo lokurhoxisa okanye ukuguqula le website nakweliphi na ixesha.
Asithathi naluphi na uxanduva lwaluphi na uhlobo olubangelwa ukusetyenziswa, okanye ukuthembela kuyo nayiphi na ingcaciso, impahla okanye inkqubo equlethwe kwisiza.
Senza iziqinisekiso ezinxulumene nesiza, okanye izinto ezikuyo, kwaye asiyikuzibophezela ngaphandle kwezinye izinto ezichazwe kule migaqo kunye nemigaqo-nkqubo yethu yobumfihlo.
Izinto eziboniswe kwisayithi yethu zinikezelwa ngaphandle kwemali, iimeko okanye iimqinisekiso ngokuchaneka kwayo. Kwinqanaba elivunyelwe ngumthetho, thina, amanye amalungu eqela lethu leenkampani kunye namalungu esithathu axhulumene nathi axhomeke ngokucacileyo:
• zonke iimeko, iimvume kunye neminye imiqathango enokuthi ingachazwe ngumthetho, umthetho oqhelekileyo okanye umthetho wokulingana.
Naliphi na uxanduva lokunye:
• ngqo; okanye
Ukulahleka okungekho ngqo okanye ukulungelelaniswa okanye umonakalo obangelwa nayiphi na umsebenzisi ngokuphathelele kwisiza sethu okanye ngokuphathelele ekusebenziseni, ukungakwazi ukusebenzisa, okanye iziphumo zokusetyenziswa kwesiza sethu, nayiphi na i-intanethi edibene nayo kunye naziphi na izinto eziposwe kuyo, kubandakanywa, ngaphandle kokunciphisa nayiphi na imfanelo:
• ukulahleka kwengeniso okanye ingeniso;
• ukulahlekelwa kweshishini;
• ukulahlekelwa kweenzuzo okanye izivumelwano;
• ukulahlekelwa kokulondolozwa okulindelekileyo;
• ukulahlekelwa kwedata;
• ukulahlekelwa kwezinto ezilungileyo;
• ulawulo lokuchitha okanye ixesha leofisi; kunye nayiphi nayiphi na ilahleko okanye umonakalo waluphi na uhlobo, nokuba luphi na olukhuphayo nokuba lubangelwa ukuphulwa (okanye ukukhohlisa) (kuquka ukunganaki), ukuphulwa kwekhontrakthi okanye ngenye indlela, nangona kukhangeleka, ukuba le miqathango iyakuthintela amabango okulahleka okanye ukulimala kwipropati yakho ebonakalayo okanye nayiphi na amabango ngokulahlekelwa kwezemali ngokuthe ngqo engabandakanywa naliphi na ididi echazwe ngasentla. Oku akuchaphazeli kwethu uxanduva lokufa okanye ukulimala okubangelwa ukunyaniseka kwethu, okanye isigxina sobuqhetseba, ukunyaniseka okungekho nkohliso okanye ukuchazwa kakubi njengento ebalulekileyo, kwaye akukho nawuphi na uxanduva olungenakukhutshwa okanye lubekelwe phantsi komthetho osebenzayo.
Ulwazi malunga nawe nokutyelela kwiziko lethu
Senza iinkcukacha malunga nawe ngokuhambelana nomgaqo-nkqubo wethu wobumfihlo. Ngokusebenzisa indawo yethu, uyavuma ukuba usebenze kwaye uqinisekisa ukuba yonke idatha enikezelwe nguwe ichanekile.
Ngaphandle kokuba ulwazi olukulewebhu luyintengiso (kubandakanywa, ngaphandle kwemida yemveliso kunye nolwazi lwexabiso), zonke ezinye iinkcukacha eziqulethwe kule website zinikezelwa ngolwazi jikelele kunye neenjongo kuphela. Nangona sizama nokuqinisekisa ukuba ulwazi oluqulethwe kwiwebhusayithi luchanekile kwaye lufikelele ngoku, asikwazi ukuba noxanduva lwanoma yikuphi ukungalungi kolwazi. Ngenxa yoko, akufanele uxhomekeke kule nkcazelo, kwaye sincoma ukuba uthathe isiluleko esongezelelweyo okanye ufune ukukhokelwa ngaphambi kokuthatha nayiphi na inyathelo ngokusekelwe kwimiba equlethwe kule website. Uxanduva lwethu kuwe njengoko kuchazwe apha ngasentla aluhlali luchaphazelekayo.
Sinokudibanisa namanye amawebhusayithi angekho ngaphakathi kwethu. Asinalo uxanduva lwale mawebhusayithi nganoma yiyiphi indlela, kwaye ungawavumeli. Kuwuxanduva lwakho ukujonga imiqathango kunye nemigaqo kunye nomgaqo-mgaqo-nkqubo nakwezinye iwebhusayithi oyityelelayo.
Awukwazi ukudibanisa nale website ukusuka kwenye iwebhusayithi ngaphandle kokuba uthobele ezi zikhokelo zilandelayo:
• Iinqonkco kufuneka zibe kwikhasi lasekhaya lewebhu kwiziko http://www.mh-chine.com;
• awukwazi ukudala isakhelo okanye nayiphi enye umda nge-website;
• isayithi apho unqwenela ukudibanisa kufuneka uhambelane nayo yonke imimiselo nemimiselo echaphazelekayo kwaye akufanele iqulethe umxholo onokuthathwa njengento ephazamisayo okanye ehlaselayo; kwaye
• akufanele usichaze ukuba siyavuma okanye sidibene nayo nayiphi na enye iwebhusayithi, imveliso okanye inkonzo.
Ngaphandle kwemimiselo yokuthengisa ye-intanethi kunye nemimiselo eyimemo yokuphatha (kungekhona isibonelelo), akukho nto kule website ihlose ukuba ibe okanye ayifanele kuthathwe njengesiphakamiso sokungena kumntu onxulumene nomnqophiso kunye nawe okanye nawuphi na umntu, ngaphandle kwezi imiqathango kunye neemeko ezilawula ubudlelwane phakathi kwethu malunga nokusetyenziswa kwewebsite.
Ukuba wenza isivumelwano kunye nomntu wesithathu ogqithwe ngamagama okanye ekubhekiselwe kuyo kule website, kukuxanduva lwakho ukuqinisekisa ukuba ukhululekile ngemimiselo yale khontrakthi kwaye uthathe iingcebiso zomthetho ukuba kuyimfuneko.
Iintsholongwane, ukuHlenga kunye nezinye iziTyala
Awufanele usebenzise kakubi isayithi lethu ngokuzisa ngokungazi iintsholongwane, i-Trojans, iimbungu, iibhomu zamagama okanye ezinye izinto eziyingozi okanye ezobuchwepheshe. Awufanele uzame ukufumana ukungena ngemvume okungagunyazisiweyo kwisayithi yethu, umncedisi apho kugcinwa khona indawo yethu okanye nayiphi na iseva, ikhompyutheni okanye isiseko sedatha esixhomekeke kwisayithi yethu. Akufanele uhlasele isayithi lethu ngokuqhotyoshelweyo okanye ukuhlaselwa kweenkonzo zokungafuni.
Ngokuphula umthetho, uza kwenza umthetho olwaphulo-mthetho phantsi kwe-Computer Misuse Act 1990. Siza kubika nawuphi na ulwaphulo-mthetho kumagunya okuthotyelwa komthetho kwaye siya kusebenzisana nalawo magunya ngokubhengeza ubunikazi bakho kubo. Xa kwenzeka eso siphene, ilungelo lakho lokusebenzisa isayithi lethu liya kupheliswa ngokukhawuleza.
Asiyi kuhlawulwa nayiphi na ilahleko okanye umonakalo obangelwa kukunqanyulwa kokunikezelwa kwenkonzo, ii-virus okanye ezinye izinto eziphathekayo zobuchwepheshe ezinokuchaphazela izixhobo zakho zekhompyutha, iinkqubo zekhompyutha, idatha okanye ezinye izinto eziphathekayo ngenxa yokusetyenziswa kwesiza sethu okanye ukukhuphela kwakho nayiphi na impahla eposwe kuyo, okanye nakweyiphi na iwebhusayithi edibene nayo.
UMthetho woLawulo kunye noMandla
Ukwakhiwa, ubukho, ukwakhiwa, ukusebenza, ukuqinisekiswa kunye nayo yonke imiba nayiphi na le migaqo kunye neemeko okanye nayiphi na ixesha le miqathango kunye nemiqathango iya kulawulwa ngumthetho waseTshayina.
Inkundla yaseTshayina iya kuba negunya elilodwa lokulungisa zonke iingxabano ezinokuvela ngaphandle okanye ngokumalunga nale migaqo neemeko okanye ukusebenzisa iwebsite.
Legal ikhaya iindidi - Izikolo --Zizi --Ribbon & Tape - Imiba - Iindawo - Iifayile - Ukwazisa - I -Tassel ne-Fringe / Ukunciphisa - UkuFunda Izinto --Izixhobo kunye nezixhobo - Umshini wokuHlola kunye neengxenye --Fabric - Abanye Ngathi - MH Uqwalaselo - UMH Industrial - MH History - Bonisa iziboniso - Abasebenzi bethu --Image Galleries - Ividiyo yeVideo Qhagamshelana nathi Indawo yeOffice --Feedback uluntu --Blog - Insiza --Dibana nathi